Wasiir kuxigeenka Maaliyadda Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo kulan la qaatay ganacsatada Puntland[Sawirro] – Wasaaradda Maaliyadda
December 4, 2016	in Warka
BOOSAASO – Wasiir kuxigeenka Maaliyadda Puntland Mudane Axmed Yaasiin Saalax ayaa maanta kulan la qaatay ganacsatada Puntland ee ku sugan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Wasiir kuxigeenka ayaa kulanka ,waxaa ku weheliyey Wasiir kuxigeenka Dakhliga W/Maaliyadda Puntland mudane Maxamed Jibriil Caateeye,Agaasimaha Cashuuraha beriga Cali Farxaan iyo saraakiil ka tirsan Wasaaradda.
Kulanka oo lagu qabtay xarunta Rugta Ganacsiga Puntland ayaa ,waxaa ka qeybgalay Hoggaanka Rugta iyo ganacsatada Puntland.
Ujeedada kulanka ayaa sidii looga tashan lahaa isla markaana loo dhaqangelin lahaa bixinta Cashuuraha ku waajibtay ganacsatada ,waxaa kaloo looga hadlay in si wadajir ah looga wada qeybqaato horumarka iyo difaacada Puntland.
Wasiir kuxigeenka Maaliyadda Dowladda Puntland Mudane Axmed Yaasiin Saalax ayaa ku booriyey ganacsatada iney door muuqda oo wanaagsan ka qaataan horumarka dalka.
Xubno kamid ah ganacsatada oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay iney door muuqda ka qaataan horumarka dalka iyo koboca dhaqaale loona baahan yahay in arrimo yaryar oo jira ay wax ka qabato Wasaaradu taasina la isla gartay.
Si kastaba kulanka ayaa kusoo dhamaaday jawi wanaagsan iyadoona loo ballamay in la joogteeyo kulamada noocaan oo kale ah.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Maaliyadda Puntland oo ka hadlay Cashuuraha (Sawirro+Video)